Izindlu zenkampani ezindala kunazo zonke ezisele e-Japan (#9)
Indawo yokuhlala esemthethweni endala esele nezindlu zenkampani eJapan. Itholakala phakathi kwedolobha elinomlando lezimayini zesiliva i-Ikuno eliqokwe njengendawo yezwe ebalulekile yamasiko. Lezi zindlu ze-"Koushataku" zakhiwa yi-Mitsubishi Corporation cishe ngo-1876 futhi manje seziyizindawo zamasiko eziqokiwe zase-Asago City. Esakhiweni esinjalo esinomlando, ungathola indawo yokuhlala ngenkathi ucabanga ngempilo yesikhathi esidlule.
Ngokuvamile, indawo yokulala yabasebenzi base-Ikuno Mine (i-Koushataku ) iyindawo yokuvakasha, okuhlanganisa nesakhiwo sokuphatha esakhiweni.
Kunezakhiwo ezi-5, okuyi-7 yazo engumlingisi wase-Ikuno obaluleke kakhulu emsebenzini ka-Akira Kurosawa. Kuyihholo lesikhumbuzo lapho kukhonjiswa khona amarekhodi efilimu ka-Takashi Shimura (1905-1982) kanye nezinsalela.
Indawo yokuhlala iyatholakala kumabhilidi 9 no-19, womabili okungamabhilidi angaziwa kusukela enkathini ye-Meiji. Izivakashi zingajabulela impilo namasiko edolobha lezimayini kuyilapho zikhumbula okwedlule.
Isakhiwo esingu-9 sibonisa ikakhulukazi izidingo zansuku zonke ezingabalulekile kusukela ekuqaleni kwe-Showa kuya kuma-'30s enkathi ye-Showa.
Iphinde ibe nokugeza kweketela okunesitayela esijwayelekile okungabonakali ezindlini zesimanje. Sicela uzizwele.
Izivakashi zingahlola ngokukhululekile nangokukhululekile idolobha lase-Ikuno kanye nomlando walo we-Silver Mining. Zitholele okunye okusele i-Asago City okumele ikunikeze njengamanxiwa e-Takeda Castle okuwumbono ongabonwa ngesikhathi "se-unkai" ulwandle lwamafu. Ngaphezu kwalokho, indawo igcina inani elikhulu lemvelo kanye neminyaka engaphezu kwe-1200 yomlando, okuhlanganisa amathonya athakazelisayo aseFrance kusukela esikhathini sokusungulwa kwezimboni.
Le ndawo isetshenziswa ngokubambisana nomkhandlu ozimele weDolobha lase-Ikuno ukuze kusekelwe imizamo yokuvuselela isifunda. Inhloso ukuthuthukisa isipiliyoni esikhethekile nesiyiqiniso sasemaphandleni sase-Japan edolobheni lezimayini elisiliva i-Ikuno.
Le ndawo isetshenziswa ngokubambisana nomkhandlu ozimele weDolobha lase-Ikuno ukuze kusekelwe imizamo yokuvuselela isifunda. Inhloso ukuthuthukisa isipiliyoni esikhethekile nesiyiq…